Hiob 12 | Intanɛt So Bible| Wiase Foforɔ Nkyerɛaseɛ
Hiob anoyi (1-25)
“Monkyɛn me” (3)
“Me ho ayɛ serew” (4)
‘Onyankopɔn na nyansa wɔ no’ (13)
Onyankopɔn korɔn kyɛn atemmufo ne ahemfo (17, 18)
12 Ɛnna Hiob kae sɛ: 2 “Ampa, mo na munim;*Muwu a na nyansa asa! 3 Me nso mewɔ ntease.* Monkyɛn me. Hena na onnim saa nneɛma yi? 4 Me ho ayɛ serew ama me nnamfo,+Me a misu frɛ Onyankopɔn sɛ onnye me so no.+ Ɔtreneeni a ne ho nni asɛm no ho ayɛ serew. 5 Nea n’asom adwo no no de, ɔserew wɔn a wohu amane;N’adwene nyinaa ne sɛ, wɔn a wohinhim* no na wohu amane. 6 Akorɔmfo werɛmfo ntamadan wɔ hɔ dwoodwoo,+Na wɔn a wɔhyɛ Onyankopɔn abufuw no wɔ ahobammɔ,+Wɔn a wokura wɔn nyame wɔ wɔn nsam no. 7 Wo de, mepa wo kyɛw, bisa mmoa, na wɔbɛkyerɛ wo;Bisa wim nnomaa, na wɔbɛka akyerɛ wo. 8 Anaasɛ dan w’ani hwɛ* asaase, na ɛbɛkyerɛ wo;Na ɛpo mu mpataa bɛka akyerɛ wo. 9 Wɔn mu hena na onnim sɛYehowa nsa na ayɛ eyi? 10 Ne nsam na ɔteasefo biara nkwa* wɔ,Na ne nsam na onipa biara* honhom* wɔ.+ 11 Ɛnyɛ aso na ɛsɔ nsɛm hwɛSɛnea tɛkrɛma* ka aduan hwɛ no?+ 12 Ɛnyɛ nkwakoraa mu na nyansa wɔ?+Na ɛnyɛ onyinkyɛ mu na ntease wɔ? 13 Ɔno na nyansa ne kɛseyɛ wɔ no;+Ɔno na afotu ne ntease yɛ ne dea.+ 14 Sɛ odwiriw biribi gu a, obiara rentumi nhyehyɛ;+Nea wato mu no, onipa biara rentumi mmue. 15 Sɛ ɔma osu gyae tɔ a, biribiara hyew;*+Ogyaa osu mu a, ebu fa asaase so.+ 16 Ɔno na ahoɔden ne nyansa wɔ no;+Ɔno na nea ɔrefom kwan ne nea ɔma nkurɔfo fom kwan nyinaa yɛ ne dea; 17 Ɔma afotufo de wɔn nan sisi fam nantew,*Na ɔma atemmufo dan nkwaseafo.+ 18 Ɔsansan nea ahemfo de kyekyere nkurɔfo no,+Na ɔde abɔso* kyekyere ahemfo no asen. 19 Ɔma asɔfo de wɔn nan sisi fam nantew,+Na otu atumfo a wɔn ase atim gu;+ 20 Ɔma afotufo anokwafo nsɛm ka wɔn anom,Na ogye nkwakoraa* nyansa; 21 Ogu atitiriw anim ase,+Na ɔma atumfo tumi brɛ ase;* 22 Nneɛma a asie wɔ sum mu no, oyi pue,+Na ɔma hann tɔ esum kabii so; 23 Ɔma aman yɛ akɛse, sɛnea ɛbɛyɛ a ɔbɛsɛe wɔn;Ɔma aman trɛw, sɛnea ɛbɛyɛ a obetu wɔn afi wɔn asaase so akɔ. 24 Ogye aman mpanyimfo ntease* fi wɔn nsam,Na asaase a ɛda mpan a enni anammɔnkwan na ɔma wokyinkyin so.+ 25 Wɔde wɔn ti pempem sum mu,+ baabi a hann nni;Ɔma wokyinkyin te sɛ mmarima a wɔabow nsã.+
^ Nt., “mo na moyɛ nnipa.”
^ Anaa “wɔn a wɔwatiriw.”
^ Ebetumi nso akyerɛ, “kasa kyerɛ.”
^ Anaa “ɔteasefo biara kra.”
^ Nt., “nnipa honam nyinaa.”
^ Anaa “ahome.”
^ Nt., “dodom.”
^ Anaa “kisa.”
^ Anaa “Ɔma nea afotufo wɔ fi wɔn nsa.”
^ Anaa “mpanyimfo.”
^ Nt., “ohodwow atumfo abɔso mu.”